Polyester Embroidery Machine Thread kubva kuChina Factory
Count: Kazhinji polyester embroidery thread has 108D/2,120D/2,135D,150D/2.
Color: makadhi emavara aripo uye mavara akagadziridzwa anogamuchirwa zvakare.
Apex 1800yds kusvika 5000yds, kana 0.5kg kusvika 1kg/hombe koni
100% polyester embroidery shinda inogadzirwa nepolyester FED shinda, yakadhayiwa pasi pekushisa kwakanyanya pamusoro pe125-135 ℃.
Iyo ine yakanakisa kupenya kwemavara, yakanaka abrasion kuramba, uye yakanakisa simba kusimba, iyo inochengeta 50000 misono isingatyoke pa1000rpm kumhanya kukuru.
Usage: Iyo tambo yekushongedza inokodzera timu logo pane zvemitambo, machira epamba, zvipfeko zvevana uye zvemitambo, zvekushongedza seams pane lingerie, zvipfeko zvevana uye zvemitambo uye zvipfeko zvinoda kuwachwa kazhinji, senge caps, headwear, mabhegi...
Shrinkage mumvura inopisa
Makadhi Emavara: Iyi ndiyo yeuvara hwembambo hwe polyester kadhi yemuvara ne 400 mavara. MH ine otomatiki mavara anoenderana michina, saka isu tinokwanisa kugadzira chaiyo mavara anoenderana masampuli nekukurumidza.
kutaura kuti ichokwadi: ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001:2015, Oeko Tex Standard 100 class 1